Kulan looga hadlayay dib u howlgelinta suuqa xoolaha oo lagu qabtay degmada Heliwaa – Radio Muqdisho
Kulan looga hadlayay dib u howlgelinta suuqa xoolaha oo lagu qabtay degmada Heliwaa
Maamulka gobalka Banaadir ayaa mas’uuliyiinta degmada Heliwaa kala hadlay horumarinta adegyada bulshada ee degadaasi.
Kulanka waxaa shir gudoominaye gudoomiye ku xigeenka arrimaha siyaasadda ee maamulka gobalka Maxamed Axmed Diiriye iyadoo kulanka inta uu socday aad loogu falanqeeyay sidii dib u dayactir loogu sameyn lahaay Suuqa xoolaha ee degmada hiliwaa.
Gudoomiyaha degmada Heliwaa ee goblka Banaadir Maxamed Axmed Xaashi oo kulanka ka dib la hadlay warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in kulanka ka dhacay xarunta degmadaasi looga hadlay sidii loo dardar gelin lahaa howlada lagu hormurinayo adeegyada bulshada sida suuqa xoolaha xarumaha caafimaadka iyo waxbarashada.
“Ujeedkana waxuu ahaay sidii maamulka gobalka Banaadir uu gacan inooga siin lahaay hormarinta degmada gaar ahaan dhanka arrimaha bulshada iyo sidii dib loogu howl galin lahaay suuqa xowlaha oo horey u ahaay suuq uu adeeggiisa uu aad wanaagsanay marka si amniga iyo hormarka degmada loo soo celiyo waa in suuqasi dib loo howl galiyaana” ayuu yiri gudoomiyaha degmada Helihaa.
Maxamed Axmed Diiriye gudoomiye kuxigeenka arimaha Siyaasada ee gobalka Banaadir oo dhankiisa hadlay waxa uu kula dar daarmay maamulka Degmada in ay dar dar galiyaan hormarinta adeegyada bulshada.
“Dardar galinta howlaha ay bulshada u hayaan ayaan kula dar daarannay maamulka degmada Heliwaa, sidoo kale waxaan ku amaanaya howlaha ay degmada u qabteen, mudadii ay degmada maamulayaan“ ayuu yiri gudoomiye ku xigeenka dhinaca siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir.
Baarlamaanka oo galay akhrinta labaad ee hindise shrciyeedka shaqaalaha ajnabiga ah